တစ်ရေးနိုးမှဗိုက်ထဆာတတ်တဲ့ အစားတစ်လိုင်းတွေအတွက် မနက်(၄)နာရီထိဖွင့်တဲ့ ဆိုင်လေး – FoodiesNavi
တစ်ရေးနိုးမှဗိုက်ထဆာတတ်တဲ့ အစားတစ်လိုင်းတွေအတွက် မနက်(၄)နာရီထိဖွင့်တဲ့ ဆိုင်လေး
By yin sandi On September 17, 2018 0
အစားတစ်လိုင်းတွေရဲ့ အကြီးမားဆုံးဒုက္ခကြီးကတော့ တစ်ရေးနိုးမှ ဗိုက်ထဲတဂွီဂွီမြည်လာတတ်တာပဲ ? စားစရာတွေအသင့်ဆောင်ထားတတ်ရင် ပြဿနာမရှိပေမယ့် ဘာမှစားစရာမရှိတဲ့အချိန်မျိုးဆို ဂွကျရော ? ဒီတော့ မနက်မိုးလင်းပေါက်ထိဖွင့်တတ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေကို လိုက်ရှာရင်း မိုးလင်းပေါက်ထိဆိုင်ဖွင့်ပြီး စားလို့လည်းကောင်း ၊ ဈေးလည်းတန်တဲ့စားသောက်ဆိုင်လေးအကြောင်း ဘဝတူအစားတစ်လိုင်းတွေကို လက်တို့ပေးဦးမယ်ကွယ်။ ဆိုင်နာမည်လေးကတော့” Moe’S dinner”ပါ။
ဒီဆိုင်လေးမှာအကြွေဆုံးကတော့ Somke လုပ်ထားတဲ့အသားလေးတွေပဲ။ အိစက်ညက်ညောပြီး အသားတစ်မျှင်ချင်းစီကကို အရသာကယိုစိမ့်ထွက်ကျနေသလိုခံစားရတယ်။ ဒီလိုအသားတွေနဲ့ ဗိုက်ဝသွားအောင်တွဲစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကြက်ဆီထမင်း ၊ ဝက်သုံးထပ်သားကင်ထမင်း ၊ ဝက်ခေါက်ကင်ထမင်း ၊ ဝက်နံရိုးကင်ထမင်း ၊ ဝက်သားကင်ထမင်း ၊ ဘဲကင်ထမင်း ၊ အမဲသားကင်ထမင်းလေးတွေစားကြည့်လိုက် ။ တစ်မျိုးစီက ဆွဲဆောင်မှုတစ်မျိုးစီနဲ့ တစ်ခါတည်းသိမ်းကြုံးစားချင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကို အရသာပြည့်ဝမှုကတော့ရှယ်ပဲ။ ဈေးတွေကလည်း အကုန်(၂၀၀၀)ပဲဆိုတော့ ဆန်သားအိအိလေးနဲ့ အသားနူးနူးညံညံလေးကို ပေါင်းစပ်ပြီး အပီအပြင်အရသာခံလိုက်ရုံပဲ။ အသားကင်တွေချည်းသီးသန့်စားမယ်ဆိုလည်းရတယ်။
Cheese နံပြားကတော့(၁၅၀၀) အာ့တာလေးလည်း တော်တော်စားလို့ကောင်းသလို လူကြိုက်တော်တော်များတယ်။ အရသာကဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ နံပြားလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးဆိုတော့ လုံးဝရှယ်ပဲ ။ အသားတွေမစားချင်ဘူးဆိုရင်လည်း ဂျင်းသုပ် ၊ လက်ဖက်သုပ် ၊ ခရမ်းချဉ်သီးသုပ် ၊ မြင်းခွာရွက်သုပ် ၊ ကန်စွန်းရွက်သုပ်တွေနဲ့ အကြော်စုံတွေရနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ အစားတစ်လိုင်းတွေအကြိုက်မတွေ့မှာ လုံးဝစိတ်မပူနဲ့။ မနက်(၄)နာရီထိဆိုင်ဖွင့်တော့ တစ်ညလုံးကြိုက်တဲ့အချိန်သွားစားလို့ရတယ်။ ဆိုင်နေရာလေးကတော့- ပုလဲကွန်ဒိုရှေ့ ၊ ရွှေဘဲရှေ့တည့်တည့်မှာပါနော်။
In Restaurant Guides Tagged all salad, BBQ Leaveacomment
အိမ်သုပ်လက်ရာအတိုင်း အစပ်အဟပ်တည့်တဲ့ခေါက်ဆွဲသုပ်ကောင်းကောင်းလေး စားချင်ရင်တော့….